Soo dejisan Scratch 450.1 – Vessoft
Soo dejisan Scratch
Kushubashada – software ah oo loogu talagalay in ay ka soo 8 sano ilmaha la baro waxa aasaaska u ah barnaamijyada iyo design. Software waa deegaan barnaamijyo kuwaas oo aad ka abuuri karaan mashaariicda la dhaceen, kulan ama sheekooyin isdhexgal iyo ku badasho si on shabakada. Kushubashada ugu soo bandhigaysaa macluumaadka ku jira nooc ka mid cayaar ah iyo madadaalo in si weyn ugu fudud ee shaqada la software ah. Software wuxuu ka kooban yahay qaybo kuwaasoo ka mid ah qalabka si ay ula qoraallada, sawirada iyo editor dhawaaqa shaqeeyaan. Kushubashada sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaashaa dhismaha caqli gal dhisay-in.
Teaching ee aasaaska u ah barnaamijyada foom cayaar ah
Horumarinta mashaariicda animation kala duwan
Tiro badan oo ah alaabta
Comments on Scratch:
Scratch Software la xiriira:
Waxbarashada Habka ugu haboon si ay u horumariyaan xusuusta oo ay bartaan luqadaha ajnabiga ah. software The lafaguraa hanashada macluumaad of user a iyo go'aamiso geynta tacliinta wanaagsan ugu.
العربية, English, Українська, Français... GeoGebra 5.0.284
Waxbarashada Software in ay ka shaqeeyaan la xisaabta kala duwan. Qalab badan iyo qaybaha si ay u abuuraan garaafka waa kuwo la heli karo si user ah.
العربية, English, Українська, Français... Babylon 10.5.0.11
Waxbarashada Qaamuuska elektaroonik ah oo taageero ka helaya luqado badan oo kala duwan. Software u tarjumay erayada ama weedhaha hal iyo waxa ku jira database badan oo ah erayada laga qaamuusyo kala duwan.
العربية, English, Français, Español... WordWeb 7.1
Waxbarashada Qalab quwada leh ka raadi erayo iyo odhaaho loo baahdo. Software soo bandhigayaa ee sharaxaada iyo ku dhawaaqida saxda ah ee erayada helay iyo sidoo kale doorteen micne ah ama antonyms iyaga.
Waxbarashada Software in ay ka shaqeeyaan la qorsheyaasha ee heerarka kala duwan ee ku adag tahay. Sidoo kale waxa ay taageertaa Warkan oo shaqada lakab.
English, Français, Español, Deutsch... Crypto! 4.2
Waxbarashada Games Software si ay u sameeyaan iyo xalinta cryptographs ah. Software waxa ka mid ah qalab badan si ay u abuuraan noocyada kala duwan ee cryptographs.
Waxbarashada software The si ay u qabtaan hawlaha xisaabta ah injineernimada iyo heerka cilmiga sayniska. software wuxuu taageeraa noocyo kala duwan oo qalab for falanqaynta, xisaab iyo jilidda xogta.
Waxbarashada Horumarinta Agabka in la abuuro jaantus dhismaha iyo khariidado fikradda. Software waa wax ku ool ah oo ku haboon waxbarashada, ururinta macluumaadka iyo curinta.
English, Français, Español, Deutsch... Synthesia 10.2
Waxbarashada Qalab ku haboon waxaa loogu talagalay in ay bartaan si ay u ciyaari biyaano ah. Software wuxuu isticmaalaa habka wax ku ool ah waxbarashada si loo gaaro natiijada ugu dhaqsiyada badan.
Waxbarashada Set ka mid ah qalab loogu talagalay xisaabinta baadhis ama tiro iyo dhisidda garaafyo. Software wuxuu kuu ogol yahay in la noocyada kala duwan ee xisaabinta shaqeeyaan.
English, Українська, Français, Español... Easy MP3 OGG WMA WAV Cutter 2.1
Converters Audio Agabka dhamaystiran shaqeeyaan files audio ka mid ah qaabab kala duwan. Software ayaa awood u kala, diinta iyo diiwaan faylasha audio.
English, Français, Español, Português
Seaside Multi Skype Launcher 1.21
Isgaarsiinta Voice Webcams Software lagu wado oo lagu maareeyo xisaab badan Skype on hal computer. Software ayaa awood u si fudud u kala bedesho xisaabaadka iyo xiriiro dhowr ah CHAT waqti isku mid ah.
Foxit Reader 7.2.8.1124 iyo 7.2.5.0930
English, Français, Español, Deutsch... SlimDrivers 2.3.1
Wadayaasha Software ayaa si aad u cusboonaysiiso darawallada in nooca ugu dambeeya ee nidaamka. Software wuxuu taageeraa hawl gurmad iyo abuuraa barta celin nidaamka.